I-Balloon Hideout - cote-montagnes.fr
I-mini-chalet yethu "La cachette" iya kukwamkela kwindawo ezolileyo, kwilali yeentaba, emaphethelweni ehlathi.
Ilungele isibini kodwa iyakwazi ukuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-4 abantu ngokwamkela ukuziphatha kakubi, izithuba zisondele kwaye zikhululekile.
I-SPA yayo yabucala yangaphandle iya kumema ukuba uphumle unyaka wonke.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo liya kukuvumela ukuba ulungiselele ukutya okulungileyo.
Jabulela ukuzola kwaye uthathe ixesha lokumamela indalo!
ILa Cachette ikunika:
Igumbi lokulala elipholileyo elinebhedi ephindwe kabini (160 x 200cm).
Indawo yokuphumla enebhedi yesofa (140 x 190 cm). Ibhedi ye-sofa ikhululekile, ubukhulu bendawo yokuhlala buyenza ibe yinto efanelekileyo kubantwana aba-2 okanye abaselula.
Ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo: i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, umenzi wekofu ye-senso, iketile, itoaster, umatshini weraclette ...
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngeshawa kunye nomatshini wokuhlamba.
I-chalet yethu encinci "iLa Cachette" ibizwa ngokufanelekileyo!
Indawo yokuhlala yi-35 m² iyonke, iindawo zincinci kodwa zicwangciswe ngombono wokungaphulukani neesentimitha.
Igumbi lokulala lingaphezulu kancinci kwe-7m²,
Ikhitshi-igumbi lokuhlala lilinganisa i-19m².
Soze sidinwe kukubona iGrand Ballon ukusuka kwithafa elinefenitshala yegadi, iindawo zokuhlala elangeni kunye neyoko etshisa iinkuni.
Ifakwe kwindawo ekhuselekileyo, ungonwabela i-SPA unyaka wonke, ihlobo nasebusika.
Indawo yokufihla isekupheleni kwelali kunye nomda wehlathi. Nangona kunjalo, uya kuba nabamelwane abakungqongileyo.
ISILUMKISO: AMATYARA EKHEPHU IYAMFUNEKA EBUSIKA.
UKWENZA NTONI EFIHLILEYO?
Phumla ... kunjalo ...
Buller ... ngokucacileyo!
UKUHAMBA: ukuhamba ngeendlela ezininzi elalini kunye namakhulu eendlela ezijikelezayo. Uya kufumana ubuninzi bemihlaba phakathi kwamachibi kunye neentaba. Ngokuchasene nemvelaphi eluhlaza, ingqungquthela nganye sisimemo sokucamngca.
I-PEDALING: iibhayisekile ezinombane okanye ezingenawo ziya kukuvumela ukuba ufumane ubunzima bethu obumangalisayo.
I-SKIING: I-Markstein, i-Grand Ballon, i-resort yaseLa Bresse, iindlela ezininzi zokunqumla ilizwe ezinqumlayo kwimizuzu eli-15.
I-FLOAT: amachibi eentaba, iLake Kruth, iLake Gérardmer, ichibi lokuqubha likamasipala.
IBHAYIBHA: isikolo separagliding imizuzu engama-20 ukusuka kwi-chalet.
UKUKHULA: ipaki yomthi ukuya emthini kunye nokuphefumla umoya omtsha kuya kukunika amava angenakulibaleka.
- Iidolophana zethu ezintle kwisidiliya saseColmar (Kaysersberg, Eguisheim, Riquewihr ...) kwimizuzu engama-40.
- Ilifa lethu: uThann kunye neliso legqwirha lakhe, i-Alsace ecomuseum, ipaki ye-Wesserling ... indlela yewayini ... indlela ye-crest ...
-Iimarike zethu zomlingo zeKrisimesi.
- Ukutya kwethu okumnandi kunye newayini ezilungileyo, ii-inns zasefama zikulindile!
IGoldbach- iAltenbach yilali ekwimitha engama-680 ngaphezu komphakamo wolwandle kumazantsi eGrand Ballon. Ukusondela kwindalo kuyonwabisa ngokwenene, ukuhamba kunye nokunyuka kuninzi kwaye kufanelekile kubo bonke abahambahambayo.
Kuyimfuneko ukuya eWiller sur Thur ukufumana iivenkile zokuqala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Goldbach-Altenbach